भारत बाट फर्के लगत्तै प्रचण्डले भने ­ संविधान दोस्रो संशोधान हुन्छ – YesKathmandu.com
सोमबार ०३, असोज २०७३
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानकोे दोस्रो संशोधन तत्कालै हुने बताएका छन् ।
संविधान दिवसको अवसरमा सोमबार टुँडिखेलमा आयोजित ‘संविधान दिवस विशेष’ कार्यक्रममा बोल्दै प्रचण्डले सबैलाई स्वीकार्य बनाउनका लागि सरकार संविधानको दोश्रो संशोधन गर्न लागेको बताएका हुन । एकपटक संविधानका महत्वपूर्ण धाराहरुमा संशोधन भैसकेको भए पनि उक्त संशोधनबाट मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारु, लागायतका समुदायका भावना समेट्ने गरी संविधानको दोश्रो संशोधन गर्न लागिएको बताए ।
हामीले संविधानमा मधेसी, आदिवासी जनजाति, समुदायका जायज मागहरुकोे सम्बोधन गर्न सकेका छैनौ । उनीहरुका जायज मागहरुको संबोधन गर्न संविधान संशोधन गर्न जरुरी रहेको छ । विश्वका कुनै पनि संविधान एकै पटक पूर्ण नहुने जिकिर गर्दै उनले जनताका आकांक्ष अनुसार यसमा संशोधन गर्दै पूर्णता दिदै जानुपर्ने बताएका छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधनको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि २०७४ माघ ७ गतेसम्म तीनै तहको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने बाध्याता रहेको उल्लेख गरेका छन् । निर्वाचनकालागि स्थानिय तहको संरचना भइरहेको र निर्वाचन आयोगसँग पनि छलफल भइरहेको बताएका छन् ।
तीन दलका प्रतिनिधि र महन्थ ठाकुरबीचको वार्ता सकारात्मक
मेरो धर्म, संस्कृति, भाषा, भेषभूषा गयो तर बोलिनँ, देश जाँदा अब चुप लाग्दिँन
रुपन्देहीको सिद्धबाबामा पहिरोले गाडी पुर्‍यो, २ को मृत्यु २ घाइते
भरतपुर महानगरको समस्यामा न्यायालयले उचित निर्णय दिने नेता नेपालको बिश्वास
एक नगरपालिका र ३५ गाविसको सर्वेक्षणको काम सकियो
महिलालाई त्रिपालमुनि अस्मिता जोगाउन मुस्किल, दजनौ ठाउँमा बलात्कारका प्रयास
रकम दिएर भोट किन्ने ! कसले बाँड्यो कहाँ रकम ?
नारी शक्तिको उत्थान र विकास गर्नु छ
‘म एमाले हुँदा गगन थापाले चित्त दुखाउनु भएको छ, मामाघरै नआए पनि केही छैन’
निर्वाचन र संविधान संशोधन एकै समयमा हुन सक्दैन
सहमतिमा संविधान संशोधन गरिने: सभापति देउवा